श्रीदेवीकी सुपुत्री जान्भी, ट्रोलले हैरान « Mazzako Online
स्वर्गिय बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवी आफ्नो जमानामा चर्चित र सम्म्मानित थिइन् । तर उनकी छोरी को पहिलो चलचित्र रिलिज सङ्गै आलोचना को सिकार बनेकी छिन्, । उनी भाग्यमानी यस अर्थमा थिइन् कि कहिल्यै ट्रोलरहरुको निशानामा पर्नु परेन । किनकी उनको पालामा सामाजिक सञ्जाल नै थिएन ।तर, उनकी छोरी त्यति भाग्यमानी छैनन् । बलिउडकी नव अभिनेत्री जान्भी कपुर अत्यधिक ट्रोल हुन थालेकी छन् । खासगरी उनको ड्रेसअपलाई ट्रोलरहरुले निशाना बनाउँछन् ।
तर, त्यस्तो तिप्पणीले जान्भी निकै प्रभाबित बनेकी छिन्। सामाजिक सञ्जालमा आउने नकारात्मक टिप्पणीले निकैनै नराम्रो लग्ने बताएकि छिन् ।
स्वस्तिमाको बिलकुलै फरक अवतार (बुलबुल टिजर)
सारालाई चिनिन हतारो
बर्षा र संजोगको बिहे कहिले ?
के फिल्ममा आउन चाहन्छिन् मिस नेपाल ?
‘शुभलभ’मा ज्योतिषी हरिहर र कृष्टिनको यस्तो रोमान्स